FANDROBANA - Trano telo nasesin'ny jiolahy tao anatin'ny alina iray • AoRaha
FANDROBANA – Trano telo nasesin’ny jiolahy tao anatin’ny alina iray
Tao anatin’ny fotoana mitovy no samy nanatanteraka fanafihana ny andian-jiolahy tany Andramasina, tamin’ny alin’ny zoma lasa teo, tokony tamin’ny misasak’alina. Tranombarotra enta-madinika miisa roa no lasibatra tao Madiorano. Tokantrano iray kosa no lasibatra tany Beravina-Andohariana. Naratra ny iray tamin’ny tompon’ireo tranombarotra.
Ankoatra izay, nahazo efatra tapitrisa ariary mahery ireo olon-dratsy tamin’ireo fandrobàna telo ireo. “Jiolahy miisa dimy nitondra basy lava iray sy basy poleta iray no nanafika ireo tranombarotra roa . Nopoirin’izy ireo ny
varavaran’ny trano. Naratra ny lehilahy iray tompon’ny tranombarotra. Vola 3 600 000 ariary, fitaovana mamaky “dvd” entin-tanana iray, finday iray, sigara maro no ampahany tamin’ireo zavatra very, ankoatra ireo firavaka volamena vitsivitsy”, araka ny tatitra voaray avy amin’ny mpitandro ny filaminana.
Lelavola 450 000 ariary, solosaina fitondra mandeha iray, vata fahitalavitra iray, bisikileta iray ary vilany iray kosa no voalaza fa noraofin’ny jiolahy manodidina ny folo izay nanafika ny tokantrano iray tany Beravina-Andohariana.
FIFAMPITIFIRANA :: Dahalo maro lavon’ny zandary, omby telonjato tafaverina